Tanana tapaka miisa 54, hita tao anaty harona plastika
Ho azo atao ny manasitrana ny homamiadan’ny nono anatin’ny iray andro
Mpitsabo maromaro tao amina hopitaly iray ao Frantsa no namorona fitaovana iray hahafahana manasitrana ny homamiadan’ny nono anatin’ny iray andro.
Mety mitarika olana ara-tsaina ny fihinanana sakafo “fast-food”
Navoakan’ny mpikaroka siantifika amerikanina avy ao amin’ny Oniversiten’ i Loma Linda fa misy hifandraisany ny fihinanana sakafo tsy voalanjalanja toy ny sakafo vidiana an-dalana ( ivelan’ny ao an-trano) sy ny aretin-tsaina.
Notsatohany tamin’ny antsy ny vadiny, namono tena izy avy eo
Lasa kamboty ray sy reny tsy sazoka noho ny hetraketraky ny ray aman-dreniny ny zazalahikely iray 9 taona monina ao Frantsa.
Navelany tsy nisy rano sy sakafo tao an-trano nandritra ny herinandro ny zanany
Voaheloky ny fitsaràna ao Rosia ho ninia namono an-janany i Maria Plenika, tovovavy 21 taona.
Efa nisokatra ilay orinasa mpamokatra Nutella lehibe indrindra
Nikatona nandritra ny andro maromaro ilay ozinina mpamokatra sôkôla amin’ny boaty Nutella, isan’ny lehibe indrindra eran-tany rehefa tsikaritra fa nisy tsy fahatomombanana ny vokatra navoakan’izy ireo.
Zaza 9 taona, namono tena fa nobedesin-dreniny
Nisafidy ny hamono tena ity tovovavy kely amerikanina iray, 9 taona rehefa nobedesin-dreniny vao maraina noho ny resaka aterineto sy finday.
Mpanjono iray no nahita tanana iray nitsingevana, nanamorona ny renirano Amour ao Siberia. Niantso ny pôlisy avy hatrany ity mpanjono ity, ka ireo pôlisy indray no nahita harona plastika lehibe nahitana tanana niisa 53 tao anatiny, teo akaikin’ny toerana nahitana ilay tanana voalohany.
Mbola tsy fantatra ireo tompon’ireto tanana ireto ary tsy fantatra ihany koa ny antony nanapahana izany. Nahitana ireny bandy sy aron-tongotra fampiasa any amin’ny hôpitaly ireny kosa, teo akain’ilay harona. Samy naminavina ny anton’izany ny haino aman-jery any an-toerana, toy ny sazy omena ny mpangalatra, taorian’ny halatra nataony nefa dia niisa 27 izany ireo mpangalatra, raha ity tranga ity no jerena. Eo ihany koa ny mety ho nampiasàna ireo tanana ireo nanaovan’ny mpianatra ho mpitsabo fitiliana. Matetika koa anefa no manapaka ny tanan’ireo razana tsy misy mpaka ny laboratoara any Rosia, mba hitehirizana ny lavotondron’ilay olona maty. Iray tamin’ireo tanana hita ireo ihany nefa no azo nalaina ny lavotondrony.